Na-ewepu Comcast's Blacklist | Martech Zone
Friday, July 18, 2008 Fraịde, Jenụwarị 11, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-eziga ọtụtụ email site na ngwa gị site na ịre ahịa email, ị kwesịrị ijide n'aka na ị na-akwado saịtị ahụ na ndị na-eweta ọrụ Internetntanetị. Edegola m banyere ide aha m AOL na Yahoo! Taa, anyị chọpụtara na enwere ike inwe nsogbu ebe enwere ike igbochi saịtị anyị Comcast. Comcast nwere ụfọdụ Ama ịgwa ma ha na-egbochi email gị.
Edeela m n'oge gara aga ihe nzọụkwụ Amụtawo m iji hụ na saịtị anyị na-ejigide aha ọma, mana ọ ka nwere ike ịnwe ihe ntinye aka na email n'agbanyeghị na ị dịghị ọcha.
Onye nnọchi anya si Comcast tụbara m email na njikọ ya Comcast's Egbochiri Enyemaka Formdị. Emejupụtala m ya niile, na-atụ anya, nke a na-edozi nsogbu anyị gbabara n'ime abalị ụnyaahụ ebe onye ọrụ enweghị ike ịnweta ohere na ngwa anyị.
Agụla m ọtụtụ nrọ abalị n'ịntanetị banyere igbochi DNS nke Comcast. Anyị na-atụ aro ka ndị ọrụ jiri OpenDNS n'ime oge.
Tags: blacklistkeukwuemailemail ojii